Ingabe Izingane Zingaba Nobuciko Be-Nail? - Izindaba - Shanghai HUIZI digital
Ingabe Izingane Zingaba Nobuciko Be-Nail?
Isikhathi: 2021-07-01 Ukushaya: 28
Ngabe izingane zingaba nobuciko be-nail? Impendulo inguyebo. Ubuciko bezipikili kudala bubonwa njengethoyizi labantu abadala kanye nethuluzi elisebenzayo labantu abadala ekufuneni kwabo ubuhle. Kodwa ingabe sikhona nesidingo sezinzipho zezingane? Kodwa ngenxa yezizathu zempilo, kufanele siqaphele kakhulu imikhiqizo yezingane ukuqinisekisa ukuthi ziphephile futhi azinabo ubuthi.
Amantombazane amancane ayathanda ukudlala ngemikhiqizo yezimonyo yomama bawo. Ukufaka isicelo sokwenza izimonyo, ukuzama izitayela zezinwele ezihlukile nokuklanywa kwezipikili akuwona umdlalo kuphela kepha kuyinto ebenza bazizwe bekhudlwana. Kuyaqondakala impela ukuthi amantombazane afuna ukubukeka njengomama wawo, udadewabo omdala noma umalumekazi. Yebo, imibono yezicucu zezingane ifanele izingane ezisencane namantombazane aseminyakeni yesikole. Ama-salon amaningi anikela ngomuthi wezingane kepha omama abaningi bakhetha ukwenza izinzipho zengane yabo ekhaya.
Sekuyisikhathi eside sizama ukuthola indlela ephumelelayo yokuxazulula le nkinga, ngakho-ke nansi iza - izitikha zezipikili zezingane zethu.Usayizi wombhede wezipikili ulungele izingane kakhulu, futhi ukwakheka kuyahlukahluka.
Izitika ze-Nail ngokuyisisekelo izitika ezinamathiselwa kuzipikili ukwenza ubuciko be-nail. Zingenye yezindlela eziphephe futhi ezilula zokwenza ubuciko obumangalisayo bezinzipho zezingane.
Imibono yezingane yezipikili yethula umqondo wobuhle besifazane wentombazane kusukela ebuntwaneni. Uqala ukuqonda ukuthi kuyini ukunakekela ukubukeka. Lokhu kungumkhuba, futhi ngokuzayo intombazane izonakekela futhi igcine izandla nezinzipho zayo kahle.
Lezi yizimpawu zezinzipho ezilula ezinganamathiselwa kuzinzipho zakho ngombono wami eziwuhlobo oluhle kakhulu lwezitikha zezinzipho zezingane.
Ziza ngemiklamo ehlukahlukene, ziphephe kakhulu futhi zisebenziseka kalula.
Ungasifaka kanjani isicelo sezitika ze-nail polish zezingane?
l Hlanza umbhede wezipikili ngephedi yotshwala.
l Khetha usayizi ofanele wesipikili ngasinye.
l Susa okweqile ngefayela le-nail bese uliphelelisa
l Bese ujabulele ubuciko obuhle be-nail.
Ukwenza izitika zakho zezipikili zihlale isikhathi eside futhi zibukeke zicwebezela kakhulu cabanga ukufaka ijazi elingaphezulu elibonakalayo ngaphezulu.
Izinzuzo zezitika ze-nail polish
v Kulula kakhulu ukufaka isicelo: Izitika ezithile zezipikili zidinga ukushisa noma amanzi okufanele asetshenziswe okungaba yisidina kepha lezi zinamathelisi ziyazinamathisela ngakho-ke kulula kakhulu ukusebenza ngazo.
v Ububanzi Obubanzi Bemiklamo Emibalabala Ongakhetha Kuyo: Kunamathani wemikhiqizo enikeza lezi zinhlobo zezitika, ezinamakhulu amadizayini ahlukene atholakalayo.
v Kulula ukususa: Ukususa lezi zinamathelisi okudingayo ukusebenzisa i-tweezer ukuzihluba. Manje uma usebenzisa ijazi elingaphezulu elijwayelekile ngaphezulu kwazo uzodinga ukusebenzisa i-remover ye-polish ukuze ususe ijazi eliphezulu ngaphambi kokuthi izitikha zikhishwe.
v Engazinzi: Lezi zinhlobo zezitika zinobungani kakhulu kwisabelomali futhi zivame ukushibhile kunokuya endaweni yokucwala izinzipho.
v Ngokushesha: Lezi zinamathelisi zingasetshenziswa ngokushesha okukhulu - kumzuzwana nje ube nobuciko be-nail obumibalabala nobumangalisayo.
Ungathola izinketho eziningi ku: www.huizinternational.com
1. Amakati & Izinja
Opopayi bebeyinsakavukela yokuzijabulisa kwethelevishini. Iningi lalabo abalingiswa bekhathuni abaziwayo nabathandwa kakhulu bezingane (ngisho nabantu abadala ngokufanayo) bayizinja noma amakati. Lezi ezinye zezilwane ezifuywayo zekhathuni ezaba yingxenye ebonakalayo yesiko elidumile.
Ukuphrinta kweZebra bekulokhu kuyintandokazi embonini yezemfashini, kuhola umkhuba wemfashini iminyaka eminingi. Okwamanje, isithombe sekhathuni sedube naso siyathandwa ezinganeni.
Ikakhulukazi idube elinemigqa ephinki, i-pinki iyahambisana kakhulu nenhliziyo yezintombazane yezingane, imivimbo iyinto ebalulekile yemfashini.
Ngasikhathi sinye, kungakhombisa nobunye bomuntu nemvelo ngemfashini.
Izingane zithanda uswidi, futhi ukufaka uswidi opopayi ezinzipho kungakhanyisa usuku lwazo.
Le candy enemibala kulula ukuyibhangqa nezingubo ezinhle zengane yakho.
Futhi kule nqubo, izingane zingaqonda futhi ukuthi uswidi awugcini nje ngokudla okulula, kepha futhi wenza umhlobiso omuhle.
Isibhakabhaka sasebusuku sigcwele izindaba, ama-adventures, kanye nokufuna ukwazi. Akukona nje kuphela ukubheka esibhakabhakeni enye yezindlela eziningi zokukhuthaza uthando lwemvelo lokufunda kwengane yakho, futhi kuyisinyathelo sokukhulisa abantu abacabangayo, ababheke phambili, abazi umhlaba wonke. Kungani ungathathi i- izingane ukuphuma bese niphendulela amakhanda enu esibhakabhakeni kuleli hlobo?
Linda, ungaba nayo yonke iplanethi kuzinzipho zakho, isn'Ngakho-ke le planethi yekhathuni ingakulethela isimanga.
Ungathola imiklamo eminingi yezitika ze-nail polish ku: www.huizinternational.com
Woza ujabule nezingane zakho !!!
Okwedlule: KULUNGILE Ukwenza Izipikili Ngenkathi Ukhulelwe?
Okulandelayo: Ungaqala kanjani ibhizinisi lakho le-nail?